SOO NOQO-NOQOTEE MA NAQBAA U DA’AY:RealMadrid Oo doonaysa Sergio Aguero
HomeWararka MaantaSOO NOQO-NOQOTEE MA NAQBAA U DA’AY:RealMadrid Oo doonaysa Sergio Aguero
Real Madrid oo mar kale kusoo laabatay xiisaha ay u qabto Sergio Aguero imisa ay ku doonaysa markaan?
Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxay mar kale kusoo laabatay xiisaha ay u qabto weeraryahanka kooxda Manchester City Sergio Aguero, waxayna iminka banaanka soo dhigtay qiimaha ay ku doonayso dalab xiddigan. Iyadoona lagu soo warmaayo in kooxda Manchester City la filayo inay £60m ka hesho Real Madrid oo ah kooxda gor-gorineysa qiima lagu iibin karo weeraryahankooda Sergio Aguero xagaaga.
Real Madrid ayaan weli ka quusan soo xero-gelinta gool dhaliyaha Liverpool ee Luis Suares, iyadoona dhinaca kalena ka wada dadaal xoogan oo ay ku doonayso inay xagaaga gacanta kusoo dhigto midkood labadaan weeraryahan. Sida ay xustay Daily Star, kooxdan heysata koobka horyaallada yurub ee Champions League-ga ayaa lacag adag ku dooneysa inay markaan ugu dhaqaaqdo soo xero gelinta weeraryahanka reer Argentine, kasoo ay doonayso in haddii uu kusoo biiro kooxda ay ku dari doonto ciyaartooyda ugu mushaarka badan garoonka Bernabeu.
Si kastaba, Aguero ayaa tan iyo markii uu kusoo biiray kooxdiisa Manchester City muddo saddex sanno haatan laga joogo wuxuu kooxdiisa kula guuleystay labo horyaalka oo English Premeir League ah, balse weeraryahankan ayaa dhowr jeer oo is xig-xigta looga gacan haatiyay Bernabeu, walow aan la ogeyn isku dayga ay Real Madrid weli wado inuu noqon doono mid guuleysan doona.
Ciyaartoy Hidh Ku Khalkhaliyey Motta Oo Lix Bilood Ciyaaraha Laga Ganaaxay